प्रहरी प्रधान कार्यालयले गर्‍यो २४ एसपीको सरुवा, को कहाँ ? - Birgunj Sanjalप्रहरी प्रधान कार्यालयले गर्‍यो २४ एसपीको सरुवा, को कहाँ ? - Birgunj Sanjalप्रहरी प्रधान कार्यालयले गर्‍यो २४ एसपीको सरुवा, को कहाँ ? - Birgunj Sanjal
प्रहरी प्रधान कार्यालयले गर्‍यो २४ एसपीको सरुवा, को कहाँ ?
५ पुष २०७६, शनिबार ०९:४१
विरगंज । प्रहरी प्रधान कार्यालयले २४ जना प्रहरी उपरिक्षक (एसपी ) हरुको सरुवा गरेको छ।
कंचनपुरमा मुकुन्द मरासनीको सरुवा भएको छ भने रवीराज खड्कालाई रौतहटमा पठाइएको छ । मकवानपुरमा सुशिल सिंह राठौर, सिन्धुलीमा रन्जु सिग्देललाई पठाइएको छ। चितवनका दानबहादुर मल्ललाई बिमानस्थलको सुरक्षा कार्यालयमा ल्याइएको छ ।
स्याङ्जामा जनर्दन जिसी र प्रदेश ट्राफिक कार्यालय बारामा श्याम कुमार महतोलाई पठाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यलय चितवनमा गंगा पन्त र धनुषामा रमेश कुमार बस्नेतको सरुवा भएको छ। झापामा कृष्ण कोइरालालाई पठाइएको छ। त्यस्तै, कंचनपुरमा मुकुन्द मरासनीको सरुवा भएको छ ।